ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းမပေါ်က ချစ်သူတွေရဲ့ ခိုလှုံရာအသစ် Coffee Studio လေး
22 Aug 2018 . 9:41 PM
ဒီလို ပိတ်ရက်လေးတွေဆိုရင် ချစ်သူ့လက်ကလေးကိုတွဲ တစ်နေကုန်မမောတမ်းလျှောက်လည်ကြမယ်၊ ပြီးတာနဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လှလှလေး တစ်ခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး ဒိတ်ချင်ကြတာ ချစ်သူတိုင်း ချစ်သူတိုင်းရဲ့ အားလပ်ရက် အပန်းဖြေနည်း တမျိုးပဲမလား။
ချစ်သူနဲ့မဟုတ်လည်း သူငယ်ချင်းတွေ လည်ရင်း၊ ပတ်ရင်း အေးဆေးအပန်းဖြေဖို့ စားကြသောက်ကြဖို့ဆို Studio တောင်မှ Coffee တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖွင့်ထားတဲ့ Studio လေးတစ်ခု ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းမပေါ်မှာ ဖွင့်လိုက်တာသိပြီးပြီလား?
အမယ်။ ဆိုင်လေးက အပြင်ဘက်မှာကိုက စက်ဘီးလေးတွေ၊ အပင်တုလေးတွေ၊ ထိုင်စရာခုံတန်းလှလှလေးနဲ့ အစွမ်းကုန်ရိုနေပါရောလေ။ ဆိုင်လေးလှတာနဲ့ တန်းဝင်ချင်ပေါက်သွားတဲ့ အခရာက အစားတလိုင်းတယောက် ဝင်ရောက်စားသောက်စပ်စုခဲ့တာလေးပြောပြရရင်-
ဆိုင်နာမည်လေးက “Coffee Studio” တဲ့။ ဆိုင်နာမည်ကြားပြီး Coffee တွေပဲရောင်းတာလို့ မတွေးချလိုက်နဲ့ဦး။ ဒီဆိုင်လေးက စားသောက်ဆိုင်လိုပဲ။ Coffee တွေနဲ့ Drinks တွေက တစ်ပိုင်း၊ အနောက်တိုင်းစာနဲ့ ထမင်းဟင်း၊စားသောက်ဖွယ်ရာတွေက တစ်ပိုင်းဆိုတော့ Coffee ပဲမြင်ယောင်ပြီး ဆိုင်ဝကနေလှည့်ထွက်မသွားကြနဲ့ဦးနော်။
ဆိုင်လေးက အထဲမှာတော့ တကယ့်ကိုရှင်းရှင်းလေးမှ ရှင်းရှင်းလေးရယ်။ ခုံလေးတွေ နံရံကပ် စာတန်းလေးတွေရယ်၊ အပြင်ဘက်ကိုငေးရင်း ကော်ဖီသောက်လို့လှတဲ့ မီးလုံးလေးတွေနဲ့ ခုံတန်းလေးရှိတယ်။ အပေါ်ထပ်ကတော့ စုံတွဲတွေအကြိုက် အကန့်လေးတွေနဲ့ ခုံတွဲလေးတွေရှိတယ်။ ကျန်တာ အကုန်မီးမှိန်မှိန်နဲ့ ရိုးရှင်းလွန်းတာကြီးတော့ အားမရဘူး။
ကိုယ်ကတော့ Mocha Frappe နဲ့ လွယ်လွယ် စားကောင်းမယ့် Ham and Cheese Sandwich လေးပဲမှာခဲ့တယ်။ ဈေးနုန်းတွေအနေနဲ့ဆို ဈေးအကြီးကြီးလည်းမဟုတ်၊ တန်တယ်လည်း မဟုတ်အနေတော်ပါပဲ။
Mocha Frappe လေးက မိုက်တယ်။ ချိုဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ Coffee နံ့လေးသင်းနေတာဆိုတော့ တစ်ခွက်လုံးကုန်တဲ့အထိပဲ။ Sandwich လေးကတော့ ဗိုက်အဆာပြေ ဆွဲလို့ကောင်းတယ်။ အစားအသောက်မီနူးပိုင်းအနေနဲ့ဆိုလည်း ဆိုင်နဲ့သိပ်မလိုက်ဖက်ဘူးလို့ ထင်မိတယ်။
တခုသတင်းကောင်းက ဒီလကုန်ထိဘာမှာစားစား ၂၀% discount ရှိတယ်ဆိုတော့ ပျော်စရာကြီးပဲနော်။ နောက် တခုသတိထားမိတာက ဝန်ထမ်းလေးတွေက အရမ်းဖော်ရွေတယ်။ ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံပေးတယ်။
ကဲ…အခရာကတော့ ခုမှဖွင့်တဲ့ Coffee နဲ့ အချစ်တွေ စုပြုံလာတော့မယ့် Studio လေးကို ရောက်ဖူးသွားပြီ။
လိပ်စာကတော့ အမှတ် ၂၂၃၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း အလယ်ဘလောက်မှာ ဟီးထနေတဲ့ Coffee ဆိုင်လှလှလေး ရှိနေပြီနော်။ မနက် ၇ နာရီကနေ ည ၉နာရီထိဖွင့်တဲ့အပြင် မနက်စာလည်းရသေးတော့ စုံစိနေရောနော်။ မနက်စာလေးတွေလည်း စားကောင်းတယ်တော့ ကြားတာပဲ။ တစ်ရက် စောစောသွားထိုင်ကြည့်ဦးမယ်။ ဪ…မေ့လို့ Wifi လည်း Free ပဲနော်။
ကဲ..ဒီပိတ်ရက်အတွက် သွားဖို့၊ စားဖို့၊ အချစ်နဲ့ ဒိတ်ဖို့ ဒီနေရာလေးကို ကြွေတဲ့သူတွေရှိရင် Mention ခေါ်ပြီး Share ထားဦးနော်။
ဗိုလျမွတျထှနျးလမျးမပျေါက ခဈြသူတှရေဲ့ ခိုလှုံရာအသဈ Coffee Studio လေး
ဒီလို ပိတျရကျလေးတှဆေိုရငျ ခဈြသူ့လကျကလေးကိုတှဲ တဈနကေုနျမမောတမျးလြှောကျလညျကွမယျ၊ ပွီးတာနဲ့ ကျောဖီဆိုငျလှလှလေး တဈခုမှာ အေးအေးဆေးဆေး ဒိတျခငျြကွတာ ခဈြသူတိုငျး ခဈြသူတိုငျးရဲ့ အားလပျရကျ အပနျးဖွနေညျး တမြိုးပဲမလား။
ခဈြသူနဲ့မဟုတျလညျး သူငယျခငျြးတှေ လညျရငျး၊ ပတျရငျး အေးဆေးအပနျးဖွဖေို့ စားကွသောကျကွဖို့ဆို Studio တောငျမှ Coffee တှနေဲ့ပတျသကျပွီး ဖှငျ့ထားတဲ့ Studio လေးတဈခု ဗိုလျမွတျထှနျးလမျးမပျေါမှာ ဖှငျ့လိုကျတာသိပွီးပွီလား?
အမယျ။ ဆိုငျလေးက အပွငျဘကျမှာကိုက စကျဘီးလေးတှေ၊ အပငျတုလေးတှေ၊ ထိုငျစရာခုံတနျးလှလှလေးနဲ့ အစှမျးကုနျရိုနပေါရောလေ။ ဆိုငျလေးလှတာနဲ့ တနျးဝငျခငျြပေါကျသှားတဲ့ အခရာက အစားတလိုငျးတယောကျ ဝငျရောကျစားသောကျစပျစုခဲ့တာလေးပွောပွရရငျ-
ဆိုငျနာမညျလေးက “Coffee Studio” တဲ့။ ဆိုငျနာမညျကွားပွီး Coffee တှပေဲရောငျးတာလို့ မတှေးခလြိုကျနဲ့ဦး။ ဒီဆိုငျလေးက စားသောကျဆိုငျလိုပဲ။ Coffee တှနေဲ့ Drinks တှကေ တဈပိုငျး၊ အနောကျတိုငျးစာနဲ့ ထမငျးဟငျး၊စားသောကျဖှယျရာတှကေ တဈပိုငျးဆိုတော့ Coffee ပဲမွငျယောငျပွီး ဆိုငျဝကနလှေညျ့ထှကျမသှားကွနဲ့ဦးနျော။
ဆိုငျလေးက အထဲမှာတော့ တကယျ့ကိုရှငျးရှငျးလေးမှ ရှငျးရှငျးလေးရယျ။ ခုံလေးတှေ နံရံကပျ စာတနျးလေးတှရေယျ၊ အပွငျဘကျကိုငေးရငျး ကျောဖီသောကျလို့လှတဲ့ မီးလုံးလေးတှနေဲ့ ခုံတနျးလေးရှိတယျ။ အပျေါထပျကတော့ စုံတှဲတှအေကွိုကျ အကနျ့လေးတှနေဲ့ ခုံတှဲလေးတှရှေိတယျ။ ကနျြတာ အကုနျမီးမှိနျမှိနျနဲ့ ရိုးရှငျးလှနျးတာကွီးတော့ အားမရဘူး။
ကိုယျကတော့ Mocha Frappe နဲ့ လှယျလှယျ စားကောငျးမယျ့ Ham and Cheese Sandwich လေးပဲမှာခဲ့တယျ။ ဈေးနုနျးတှအေနနေဲ့ဆို ဈေးအကွီးကွီးလညျးမဟုတျ၊ တနျတယျလညျး မဟုတျအနတေျောပါပဲ။
Mocha Frappe လေးက မိုကျတယျ။ ခြိုဆိမျ့ဆိမျ့လေးနဲ့ Coffee နံ့လေးသငျးနတောဆိုတော့ တဈခှကျလုံးကုနျတဲ့အထိပဲ။ Sandwich လေးကတော့ ဗိုကျအဆာပွေ ဆှဲလို့ကောငျးတယျ။ အစားအသောကျမီနူးပိုငျးအနနေဲ့ဆိုလညျး ဆိုငျနဲ့သိပျမလိုကျဖကျဘူးလို့ ထငျမိတယျ။
တခုသတငျးကောငျးက ဒီလကုနျထိဘာမှာစားစား ၂၀% discount ရှိတယျဆိုတော့ ပြျောစရာကွီးပဲနျော။ နောကျ တခုသတိထားမိတာက ဝနျထမျးလေးတှကေ အရမျးဖျောရှတေယျ။ ရငျးရငျးနှီးနှီးဆကျဆံပေးတယျ။
ကဲ…အခရာကတော့ ခုမှဖှငျ့တဲ့ Coffee နဲ့ အခဈြတှေ စုပွုံလာတော့မယျ့ Studio လေးကို ရောကျဖူးသှားပွီ။
လိပျစာကတော့ အမှတျ ၂၂၃၊ ဗိုလျမွတျထှနျးလမျး အလယျဘလောကျမှာ ဟီးထနတေဲ့ Coffee ဆိုငျလှလှလေး ရှိနပွေီနျော။ မနကျ ၇ နာရီကနေ ည ၉နာရီထိဖှငျ့တဲ့အပွငျ မနကျစာလညျးရသေးတော့ စုံစိနရေောနျော။ မနကျစာလေးတှလေညျး စားကောငျးတယျတော့ ကွားတာပဲ။ တဈရကျ စောစောသှားထိုငျကွညျ့ဦးမယျ။ ဪ…မလေို့ Wifi လညျး Free ပဲနျော။
ကဲ..ဒီပိတျရကျအတှကျ သှားဖို့၊ စားဖို့၊ အခဈြနဲ့ ဒိတျဖို့ ဒီနရောလေးကို ကွှတေဲ့သူတှရှေိရငျ Mention ချေါပွီး Share ထားဦးနျော။